यसरी फुट्यो पार्टी एकताको निर्णय, एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै ओलीको कार्यशैलीप्रति माओवादी असन्तुष्टि ! | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > राजनीति > यसरी फुट्यो पार्टी एकताको निर्णय, एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै ओलीको कार्यशैलीप्रति माओवादी असन्तुष्टि !
यसरी फुट्यो पार्टी एकताको निर्णय, एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै ओलीको कार्यशैलीप्रति माओवादी असन्तुष्टि !
वैशाख ३१, पार्टी एकताको नजिक रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच फेरि खटपट सुरु भएको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर माओवादी सशंकित देखिएको हो ।
माओवादी सचिवालय सदस्य मणि थापाले एमाले नेतृत्वले सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरिरहेको भन्दै कार्यशैलीप्रति आशंका व्यक्त गरे । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बजेट निर्माण प्रक्रिया र श्वेतपत्र जारी हुँदा आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।
माओवादी सचिवालय सदस्य तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि सत्तारुढ दलमा बजेटबारे आवश्यक छलफल नभएको बताए ।
लोकपारखीहरुका लागि फरक शैलीको दोहोरी गित मन परेको मान्छेलाई ‘हत्ते हालिन्छ’ (भिडियोसहित)
म्याग्दीको तातोपानी बजारमा बाढीले ४ घर पुर्यो, सडक अवरुद्ध
इयूको प्रतिवेदनबारे पूर्व डीआइजी सिलवालको यस्तो ‘ट्वीट’ ! पढ्नुहोस्
मोदीको स्वागतमा राणाकालिन झझल्को, प्रत्येक गाउँ, नगर प्रमुखलाई अनिवार्य उपस्थितिको निर्देशन